Qalabka android sida kombiyuutar ama laptop uu leeyahay geedi socodyo badan oo ku maqan oo kala duwan mar walba socda ee asalka ah, laakiin ka duwan computer ama laptop ah, dagdag ah user helaan hawlgaladaa suurtogal ma aha had iyo jeer. Nadiifinta Apps is ogow of kuwaas oo ku maqan geedi socodka soo jeeda, oo dila geeddi aan waxtar lahayn oo cunaan meel xusuusta. Waxaan eegno 15 barnaamijyadooda nadaafada wanaagsan ee android maqaal soo socda.
Wondershare MobileGo yahay oo dhan hal tababare android leh awood ah nadiifinta fiican iyo weliba. Waxay kaa caawinaysaa in aad kor u barnaamijyadooda, maareeyaan APKs, barnaamijyadooda uninstall iyo meel bannaan oo lacag la'aan ah oo ay ka takhalusaya files junk. Available lacag la'aan ah oo ah qiimaha ugu Google Play, app tani waa ka qaaddid oo cajiib ah oo ku nadiifiyo android joogto ah. Its qaababka dheeraad ah sida kala iibsiga file, SafeEraser iyo Maareeyaha App waa haa weyn kuwii oo dhan isticmaala xamaasad leh halkaas kuwaas oo raadinaya xal oo dhan ka mid ah in dhammaan dhibaatooyinka la xiriira android ay sameeyaan.
Faa'iido : Free, oo quruxsan oo interface user is-dhexgal, oo dhan ee hal ujeedo loo dhisay app
Qasaarooyinka : muuqataa in ay noqdaan kuwa dhaqda batariga ka dib markii in yar
2. Nadiifi Master
Master nadiif ah waa app nadiifsan ugu balaadhan looga isticmaalaa android sal weyn leh user oo dhan dunida dacaladeeda. Waa ay fududahay in la isticmaalo iyo ogolaanaysaa user nadiifiso Cache app, files haraaga ah, taariikhda iyo qaar badan oo kale oo files junk oo uuna ilaa xitaa ka dib markii rakibidda app ah. Master Nadiifi laftiisa ayaa interface midabo iyo is-dhexgal, laakiin qayb ka mid ah ugu fiican yahay in ay tani ma keeno batari dheecaan.
Faa'iido : Interactive iyo fududahay in la isticmaalo interface, tababaraha app dheeraad ah iyo ilaalinta anti-virus
Qasaarooyinka : ma laga yaabaa in ay faa'iido badan in dadka isticmaala khabiir ku raadinaya si ay u sahamiyaan awood ay qalab ee
Coobbi App khasnado kuu ogolaanaysaa inaad kala cadeeyo files khasnado lagu kaydiyaa by Chine ee android ah. Chine ayaa ku kaydiso files khasnado kuwaas oo si dhaqso ah in dib loo bilaabayo laakiin files Kuwaan waxa ay cabsiyaha ilaa muddo ka soo qaato oo xasuusta oo dheeraad ah. App khasnado nadiifsan ogolaanaysaa user aqoonsado barnaamijyadooda xasuusta baabbi'iya oo ku salaysan tirada files junk abuuray by barnaamijyadooda. Its feature ugu fiican waa in ay taasi u xusuusinaysa in aynu user ogaado goorta ay files khasnado u baahan tahay in la nadiifiyaa.
Faa'iido : fududahay in la isticmaalo iyo oggolaanayaa mid nadiifinta tuubada
Qasaarooyinka : koobnayn oo kaliya in ay files khasnado
4. du Speed ​​buusterka
Suubis ah xawaaraha du ma ahan oo keliya ilaa Daahiriyo bannaan ee android ah laakiin waxa uu leeyahay Coobbi Trash u app khasnado iyo nadiifinta file junk, a xawaaraha hal-taabashada, tababaraha app, antivirus, la taliyaha gaarka ah iyo ka dhisay-in imtixaanka xawaaraha internet. Dhammaan functionalities waxay ka dhigi u weyn oo dhan ka mid ayna qalab uu si gaar ah.
Faa'iido : qoreysa suubis ah ciyaar, suubis ah xawaaraha iyo xawaaraha
Qasaarooyinka : Askar laga yaabaa in user celceliska laylis
1 Tubada nadiifiye, sida magaca muujinaysaa, waa app lagu nadiifiyaa iyo optimizes qalab android aad kharash ku taabasho kaliya. Waxaa qoreysa Coobbi Cache ah, nadiifiyaha Taariikhda iyo Call / Text Coobbi log. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo uu heysto dooq nadiifinta default ah in ay nadiifiso falalka default ee app ah ee. Its feature ugu yaab leh waa in ay kuu ogolaanaysaa user ka dhigay bareeg ah nadiifinta. App ayaa markaa sii wadi kartaa si aad u nadiifiso android laftiisa ka dib ah markii si joogto ah oo aan dhiba user ee ogolaansho.
Faa'iido : xor ah oo si sahlan loo isticmaali
Qasaarooyinka : functionalities ku koobnayn
6. SD Yartoy
SD Yartoy waa app faylka dayactirka in sidoo kale u dhaqmo sida Tababaraha file ah. Waxaa raad faylasha iyo fayl tagay by Chine in lagu uninstalled ka qalab android iyo siidaysay ilaa meel iyaga oo la tirtiro xasuusta. Waxay leedahay laba nooc; version xorta ah waxaa loo isticmaali karaa sida fudud laakiin hufan app habka dayactirka ah laakiin version premium uusan dari ah abaalmarinno dheeraad ah dhowr app.
Faa'iido : raadkaygay laga dhintay fayl iyo daahirsho nidaamka iyaga ka mid ah
Qasaarooyinka : in ka badan oo app dayactirka ah, ayna ka yar
7. Coobbi xad dhaaf ah
App Tani waxaa loogu talagalay dhammaan xogta dadka miyir raba telefoonka ah filaayo laakiin ka cabsi laga badiyay macluumaadka ama in ay la kulmaan app shilalka lama filaanka ah, iska ilaali nadiifiyo android. Nadiifiye xad dhaaf ah ayaa awood u hanato iyo tirka junk files weyn oo aan tempering kasta oo macluumaadka nidaamka. Waxaa ka shaqeeya sida app hal-tuubada in kaliya uu u baahan yahay ogolaansho user si ay u doortaan waxa ay tirtirto iyo qaadataa daryeelka inteeda kale.
Faa'iido : free, fududahay in la isticmaalo, wax cabsi ah ka mid ah laga badiyay xogta
Qasaarooyinka : celcelis ahaan soo jiidasho leh u isticmaala khabiir in rabto in aad hesho in ka badan oo ka mid ah qalabka
Price : Free0
CCleaner ayaa hore u magaceeda sameeyo isagoo nadiifsan sixun ugu cadcad ee kombiyuutarada iyo laptops. CCleaner sida ugu nadiifiyo kale oo siidaysay boos ay soo reynaya faylasha ku meel gaar ah, folder downloads iyo khasnado codsiga laakiin wixii intaa waxa kale oo uu awood u leeyahay in cadeeyo wicitaankaaga iyo log sms. Sifooyinka kale oo dheeraad ah ayaa sidoo kale waxaa app weyn u leedahay in aad telefoonka android sameeyo.
Faa'iido : ayaa siyaada ah sida tababaraha pp, processor, RAM iyo kaydinta mitir, batteriga iyo qalabka heerkulka.
Coobbi 9. Root
Sida magaca muujinaysaa, xidid nadiifsan u baahan tahay ogolaansho xididka si aalad android si ay u qabtaan nadiifinta dhamaystiran qalabka. Waxay u shaqeysaa laba hababka; nadiif ah oo nadiif ah oo buuxa oo degdeg ah. Fursada deg deg ah oo nadiif ah waa sida mid ka mid ah qalabka caadiga ah nadiifinta tuubada iyo falaa nadaafadda aasaasiga ah sida la xorayn, ilaa xusuusta iyo dilka geeddi socodka oo aan waxtar lahayn. Full nadiif ah ayaa si kastaba ha ahaatee, waa baxayaa, siday hadda sida nadiifinta khasnado dalvik qalabka android, laakiin waxay u baahan tahay reboot nidaamka ujeeddo ah.
Faa'iido : tagaa fog xadka ee lagu nadiifiyo android caadiga ah ka baxsan
Qasaarooyinka : ma lacag la'aan ah, waxay u baahan tahay ogolaansho xidid
Tuner 10. processor
Tani qalab ayna free kuu ogolaanayaa inaad la ciyaaro goobaha aad processor si aad u hesho qaab tarin ka qalab android aad. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad labada underclock iyo overclock si loo badbaadiyo batteriga iyo hagaajinta hawl-qabadka siday u kala horreeyaan. Tuner processor waxay u baahan tahay ogolaansho xidid inay u ordaan oo waxay noqon karaan qaar yar oo khatar ah haddii loo isticmaalo cilmi la'aan waxaana ka hor la xiriira dulqaad ee hardware android qaar ka mid ah.
Faa'iido : qalab weyn oo loogu isticmaala khabiir ku doonaya si ay ula socdaan horumarka ay qalab iyo nadiif ah sida
Qasaarooyinka : waxay u baahan tahay ogolaansho xidid
11. 3c qalabeed / Android tuner
Tani app sida processor tuner ogolaanaysaa camal user la goobaha android nidaam laakiin wixii intaa sidoo kale tababare hawsha si ay u maareeyaan ama dilaan barnaamijyadooda. Waxay bixisaa user ku leh wax badan oo fursado si ay u soo jiidaysaa oo la goobaha nidaamka laakiin iyaga oo isticmaalaya iyaga oo aan qaar ka mid ah cilmi-baarista samaynaya macno ahaan waxay keeni kartaa in bricking qalab ah.
Faa'iido : ogolaanaysaa users baadhaan waxa ay qalab awood u
Qasaarooyinka : waxay u baahan tahay ogolaansho xidid, ma si sax ah nadiifiye sidaas daraaddeed kaliya isticmaala khabiir ka faa'iidaysan karaan
Gacanta Device waa weyn yahay, nidaamka lacag la'aan ah qalab tweaking ah. Waxa ay leeyihiin Tababaraha app ah laakiin inta badan waxa ay u ogolaataa user ay u la goobaha nidaamka sida processor iyo GPU goobaha ciyaaro oo ay la socdaan badan oo dhan goobaha OS sidoo. Sida horay loo sheegay, oo isticmaalaya barnaamijyadooda sida iyagoo aan ogeyn dhib ah in ay sababi karaan in uu noqon karaa mid si dhab ah khatar ku aalad android.
Faa'iido : ogolaanaysaa users khabiir isticmaalaan android si ay ugu fiican
App Tani si gaar ah waxay bixisaa macluumaad la xiriira xaaladda batteriga iyo isticmaalka laakiin dadka isticmaala qaar ka mid farsamo oo ogaada sida isticmaali kartaa macluumaadka si wax ku ool ah u maamulaan barnaamijyadooda. Waxaa lagu ogaadaa app in looga hortago qalab soo galaan hab hurdo iyo cunaan khayraadka batteriga.
Faa'iido : ogolaanaysaa user ogaado sababta keentay drainages batari in si sax ah wax looga qabto arrinta
Qasaarooyinka : waa in ka badan oo ah app xaalada batariga halkii ay ka nadiifsan sidaas oo kale keliya users khabiir ka faa'iidaysan karaan
14. Greenify (u baahan yahay xidid)
Greenify tiraa isticmaalka hawl dilay barnaamijyadooda adigoo wax gubaya khayraadka barnaamijyadooda galay hab isu suuris ah si ay u awoodin in ay helaan khayraadka nidaamka. Waxay u baahan tahay ogolaansho xidid in ay ka shaqeeyaan.
Faa'iido : ka socda geedi socodka soo jeeda sidaas hayo meel in xusuusta free joojiyo app
Qasaarooyinka : ma dhab ah nadiifiye Sidaa darteed, kaliya isticmaala khabiir ka faa'iidaysan karaan
15. Coobbi The - dardar & nadiif ah
Iyadoo interface ah oo quruxsan oo is-dhexgal, qalab lagu nadiifiyo Tani waxay kuu ogolaanaysaa users ilaa lacag la'aan ah kaydinta iyo nadiifiso files junk. Waxaa ka shaqeeya sida app nadiifinta android caadiga ah, laakiin waa lacag la'aan ah oo uu leeyahay in ka badan hal milyan oo downloads.
Faa'iido : awoodda dheeraadka ah ee nadiifinta barnaamijyadooda xaasidnimo
Qasaarooyinka : shaqeynta celcelis ahaan ku habboon oo keliya dadka isticmaala laylis
> Resource > Apps > 15 Best Nadiifinta Apps u Android